Laba arrimood oo ku saabsan sida kacbada loo dhaqo - Jigjiga Online
HomeSomalidaLaba arrimood oo ku saabsan sida kacbada loo dhaqo
Kacbada barakaysan gudaheeda waxaa sannadkii la dhaqi jiray seddax goor, waana arrin soo billaabatay xilligii Nabi Maxamed NNKH.
Markii ugu horreysay ee la dhaqay waxay ahayd xilligii ay Muslimiinta qabsadeen magaalada Makah iyo kacbada.
Waxaana ka dhaxlay dawladihii muslimiinta ee u kala dambeeyay sida khulafadii, Umawiyiintii, Cabaasiyiintii, Cusmaaniyiintii, iyo Boqortooyadan Reer Aala-Sacuud.
Bilowgii qarnigii 18-aad waqtigii ay dhalatay boqortooyadan saddexaad ee Reer Aala-Sacuud ee uu hogaaminayay Boqor Cabdicasiis ayaa laga dhigay in Kacbada sannadkii laba jeer la dhaqo, waxaana loo kala qeybiyay 15-ka bisha Muxaram ee tirsiga islaamka iyo 10-ka Shacbaan.
laakiin sannadkii 2016-kii ayaa la joojiyay markii labaad, waxaana lagu dhigay oo kaliya 15-ka Muxaram oo kaliya. Haddaba shalay ayaa la nadiifiyay.
Qaabkee loo dhaqaa kacbada?
Amiir Khalid Al-Faysal oo ka tirsan boqortooyada ayaa nadiifiyay kacbada. Wuxuu ka dhaqay gudaha iyo bannaanka isagoo ku tirtiray maro yar oo la dhexgeliyay biyo la isku daray oo ah Zamzam iyo Maa’ul Wardi.
Diyaargarowga sida loo dhaqo wuxuu bilowdaa maalin ka hor xilliga nadiifinta waxaana la sii diyaariyaa biyaha la isku daray oo lagu sii dhexdaray Cuud iyo barfuun. Taawello ama shukumaan ayaana dhaqidda oo dhan loo adeegsadaa.
Axmed Adan Dagaal (Axmed Safiina) oo ka faalooda taariikhda islaamka ayaa BBC Somali u sheegay: “Wakhtigii Nebigu dhashay beelaha Qureysh shaqada Xaramka way u qaybsanayd”.
“Reer Banii Haashim oo uu Nebigu ka dhashay waxay lahaayeen oo ay hayeen furaha ceelka Zamzamka iyo waraabinta xujayda oo loo yaqaanay (Al-Siqaaya). Furaha Kacbadan waxa hayay beesha reer Baniishayba,” ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray: “Furahaasi waxaa hayay ninkii beesha u waynaa oo la odhan jiray Cusmaan ibnu abii-Dalxa. Waxa jirtay qiso dhex martay isaga iyo Nebi Muxamed (nabadgelyo korkiisa ha ahaatee) wakhtigii ay diinta Islaamka cusbayd. Wuxuu Nebigu ka dalbay inuu Kacbada u furo wuuna u diiday, markaas ayuu nabigu ku yidhi ‘waxa imaan doonta maalin aan kaa qaado’.”
“Furaha Kacbada waa muhiim, taariikh ahaan iyo diin ahaanba. Wuxuu furaha leeyahay kiish u gaar ah oo la geliyo oo ay hayaan reerkaas iyo Golaha Shuurada,” sida uu sheegay Dr Maxamed al-Zulfah oo la hadlay Al-Carabiya.
Al-Zulfah oo ku takhasusay taariikhda Islaamka, wuxuu sheegay in qaabka furaha uu is bedledelo. “Madxaf ku yaalla Turkiga waxaa yaallo 48 fure oo la uruurinayay tan iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, halka Sacuudiga uu hayo Laba fure oo koobi ah oo dahab laga sameeyay.